Butt Fusion Machines Abakhiqizi, abahlinzeki - China Butt Fusion Machines Factory
Isicelo nesici SUD1200H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Ukusebenza Nesici ► Kufanelekile ukufakwa kwe-butt ngamapayipi epulasitiki nokufakwa okwenziwe ngezinto ze-PE, PP ne-PVDF. ►Iqukethe ifreyimu eyisisekelo, iyunithi ye-hydraulic, ithuluzi lokuhlela, ipuleti lokushisa, ubhasikidi nezingxenye zokuzikhethela. ► I-PTFE ekhiphekayo ishisa ipuleti efudumele ngohlelo lokulawula lokushisa olunembile. ► Ukucindezela kokuqala okuphansi kuqinisekisa ikhwalithi yokushisela ethembekile yamapayipi amancane. ► Indawo yokushisela eguqukayo inika amandla ukufakela ukufakwa okuhlukahlukene kalula. ► Imitha yengcindezi enembile futhi eshaqisayo ephezulu ...
Isicelo ne-Feature SUD400H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...